Huyssen ike bụ onye na-eweta ụwa zuru ụwa ọnụ nke High Voltage Programmable DC Power Supplies. Anyị nwere usoro nke DC programmable ike onunu na ndị kasị adabara na kpọmkwem na ezi na-aga n'ihu DC ngwa ebe a kwụsiri ike na-achịkwa nke ọma mmepụta voltaji na ugbu a dị oké mkpa. Ihe...
Iji dozie nrụgide ọrụ, mepụta agụụ, ọrụ, na obi ụtọ na-arụ ọrụ ikuku, mee ka ndụ omenala ndị ọrụ na-amu amu, melite ọdịmma ụlọ ọrụ, na ịbawanye nkwurịta okwu na mmekọrịta n'etiti ndị ọrụ, Huyssen Power haziri otu n'èzí otu rafting otu ụlọ ac ...
Huyssen Power's ultra-thinth waterproof power on mmiri ewepụtala usoro 800W ọhụrụ. The LED ultra-thin waterproof ọkọnọ ike, n'ihi na aha na-egosi, bụ ultra-mkpa na thinner, nke nwere ike imeghari ka a nta nwụnye ohere; waterproof, ndị elu àgwà ike ọkọnọ na ahịa genera ...
Huyssen's waterproof eweta na elu PFC
Huyssen's PFC ọkụ anaghị egbochi mmiri gụnyere ike sitere na 150 Watt ruo 600W. Voltage mmepụta nwere ike ịbụ 5V,12V,24V,30V,36V,48V, wdg. A na-akwakọba ya na nke siri ike, enweghị mmiri, ihe mkpuchi uzuzu, ihe mkpuchi aluminom nke IP67 kwadoro. Ihe ntinye na mmepụta bụ site na eriri USB akara, njikọ okirikiri...
Ebunye ike voltaji dị elu maka Ahịa Electron Beam
Ngosipụta ọkụ dị elu maka Electron Beam Market akụkọ nyocha nyocha na-enyocha ọnọdụ ahịa, mpaghara asọmpi, nha ahịa, òkè, ọnụego uto, ọnọdụ n'ọdịnihu, ndị ọkwọ ụgbọ ala ahịa, ohere, ihe ịma aka Ebumnuche ebumnuche nke akụkọ a bụ inyere onye ọrụ aka ịghọta ahịa dị na ya. usoro nke...
DIN Rail ike ọkọnọ ahịa 2021 na-abawanye agụụ
Ọkụ ụgbọ okporo ígwè DIN gbadoro ụkwụ n'usoro ọkọlọtọ nke Deutsches Institut fur Normung (DIN) mebere, nke bụ ọgbakọ ọkọlọtọ mba na Germany. Ọkụ ọkụ ndị a na-agbanwe agbanwe (AC) ka ọ na-eduzi ngbanwe dị ugbu a (DC) n'ụdị dị iche iche. Onye ọrụ njedebe nwere ike nweta...
Ahịa ike ọkọnọ DC nke mmemme na 2021
site admin na 21-05-07
Eprel 29, 2021, New York, USA: Ụlọ ọrụ mmepụta ihe na nyocha gụnyere akụkọ kachasị ọhụrụ na "Global Programmable DC Power Supply Market 2021-2028" na katalọgụ nyocha ahịa ya. E kewala ahịa ọkụ ọkụ DC nke programmable nke ukwuu iji mee ka ndị na-agụ akwụkwọ nwee ike...
Ọrụ nke capacitors na ike ọkọnọ
Enwere ike iji capacitors n'ịgbanwe ọkụ ọkụ iji belata mkpọtụ mkpọtụ, melite nkwụsi ike ọkọnọ ike na nzaghachi na-adịru nwa oge, mana enwere ọtụtụ ụdị n'ime ha, ka anyị leba anya ọnụ. Enwere ike kewaa ụdị capacitor capacitors n'ime mgbawa capacitors na plug-in capacitors accordi ...
Igwe ikuku oxygen na-enye ike
Igwe oxygen hydrogen bụ ụdị akụrụngwa ike nke na-eji teknụzụ mmiri electrolytic wepụ hydrogen na ikuku oxygen na mmiri. A na-eji hydrogen dị ka mmanụ ụgbọala na oxygen na-akwado combustion. Ọ nwere ike dochie acetylene, gas, liquefied gas na ndị ọzọ carbonaceous gas. Ọ nwere ad...
Nkwanye ike Dc, Na-eweta ọkụ ọkụ Led Strip, Nnweta ike mmemme, mgba ọkụ mode ike ọkọnọ, Nnyenye ike na-agbanwe agbanwe, Nweta ike ahaziri ahazi,